စီးရီးအအေသငျး ၄ သငျးပေါငျးရဲ့ ဝငျငှထေကျ ပိုမြားနတဲ့ ရျောနယျဒိုရဲ့လစာ – Premier League Special
သတငျးတှအေရ ဂြူဗငျတပျဈစတား ရျောနယျဒိုဟာ တဈနှဈလုပျခလစ ပေါငျ ၂၈ သနျးရရှိနပွေီး အဆိုပါဝငျငှဟော စီးရီးအအေသငျး ၄ သငျးပေါငျးဝငျငှထေကျပိုမြားနတေယျလို့ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
အသကျ ၃၅ နှဈသားဟာ ၂၀၁၈ ခုနှဈက ရီးရဲလျအသငျးကနေ ဂြူဗငျတပျဈကိုရောကျရှိလာပွီးနောကျ တဈပတျလုပျခလစာ ပေါငျ ၅၄၀၀၀၀ အထိရရှိနတောဖွဈပါတယျ။
ရျောနယျဒိုဟာ အခွားကွျောညာတှကေနေ ဝငျငှတှေလေညျး ရရှိနပေမေယျ့ ဂြူဗငျတပျဈစတားရဲ့လုပျခလစာက အခွားစီးရီးအအေသငျး ၄ သငျးဝငျငှထေကျပိုမြားနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒယျလိုစပေါ့တျသတငျးဌာနရဲ့အဆိုအရ ယူနိုကျတကျတိုကျစဈမှူးဟောငျးဟာ အီတလီရဲ့လုပျခလစာအကောငျးဆုံးကစားသမားအဖွဈရပျတညျနပွေီး ဒုတိယလုပျခလစာရရှိနတေဲ့သူထကျ ၄ ဆ လောကျပိုမြားနတေယျလို့ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
အီတလီသတငျးဌာနရဲ့အဆိုအရ ဂြူဗငျတပျဈစတားရျောနယျဒိုရဲ့အသငျးဖျော ဒီလဈဂျြဟာ တဈနှဈလုပျခလစာ ပေါငျ ၇.၂ သနျးရရိနပွေီး တဈပတျလုပျခလစာ ပေါငျ ၁၃၈၀၀၀ အထိရရှိနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ရျောနယျဒို ၊ ဒီလဈဂျြတို့နောကျမှာတော့ ဒိုငျဘားလားက ပေါငျ ၆.၆ သနျး ၊ ရာဘီအော့က ပေါငျ ၆.၃ သနျး ၊ ရမျဆေးကလညျးပေါငျ ၆.၃ သနျးရရှိနတောဖွဈပါတယျ။
ဒယျလိုစပေါ့တျသတငျးဌာနက ဂြူဗငျတပျဈရဲ့လုပျခလစာဟာ စီးရီးအကေလပျ ၄ သငျးဖွဈတဲ့ အူဒီးနီးဈ ၊ ဗီရိုနာ ၊ ခရိုတိုနီ ၊ စပီဇီယာတို့ထကျ ဝငျငှပေိုမြားနတေယျလို့ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကစားသမားတှအေပွငျ အငျတာမီလနျစတား လူကာကူကလညျး စီးရီးအရေဲ့လုပျခလစာအမြားဆုံးကစားသမားအဖွဈပါဝငျနပေါတယျ။
အသကျ ၂၇ နှဈသားဟာ ယူနိုကျတကျကနေ အငျတာကိုရောကျလာပွီးနောကျ တဈနှဈလုပျခလစာ ပေါငျ ၆.၈ သနျးအထိ ရရှိနပေါတယျ။
စီးရီးအရေဲ့လုပျခလစာအမြားဆုံးကစားသမား ၁၀ ဦး – ၁၀. အီဘရာဟီမိုဗဈ – ပေါငျ ၆.၃ သနျး ၊ ၉. ဆနျးခကျြဇျ – ပေါငျ ၆.၃ သနျး ၊ ၈. ရမျဆေး- ပေါငျ ၆.၄ သနျး
၇. ရာဘီအော့ – ပေါငျ ၆.၄ သနျး ၊ ၆. ဒိုငျဘားလား – ပေါငျ ၆.၆ သနျး ၊ ၅. ဒီဇီကို – ပေါငျ ၆.၈ သနျး ၊ ၄. အဲရဈဆငျ – ပေါငျ ၆.၈ သနျး
၃. လူကာကူ – ပေါငျ ၆.၈ သနျး ၊ ၂. ဒီလဈဂျြ – ပေါငျ ၇.၂ သနျး ၊ ၁. ရျောနယျဒို – ပေါငျ ၂၈ သနျး
ဒယျလိုစပေါ့တျက ဂြူဗငျတပျဈနညျးပွ ပီယာလိုဟာ တဈနှဈလုပျခလစာ ပေါငျ ၁.၆ သနျးရရှိနပွေီး လာဇီယိုနညျးပွ အငျဇာဂီ ၊ ဘိုလော့ဂျနာနညျးပွ မီဟယျလိုဗဈ နဲ့ အစေီမီလနျနညျးပွ ပီအိုလီတို့ကတော့ တဈနှဈလုပျခလစာပေါငျ ၁.၈ သနျးအထိရရှိနတေယျလို့ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
စီးရီးအေအသင်း ၄ သင်းပေါင်းရဲ့ ၀င်ငွေထက် ပိုများနတဲ့ ရော်နယ်ဒိုရဲ့လစာ
သတင်းတွေအရ ဂျူဗင်တပ်စ်စတား ရော်နယ်ဒိုဟာ တစ်နှစ်လုပ်ခလစ ပေါင် ၂၈ သန်းရရှိနေပြီး အဆိုပါဝင်ငွေဟာ စီးရီးအေအသင်း ၄ သင်းပေါင်းဝင်ငွေထက်ပိုများနေတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၃၅ နှစ်သားဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ရီးရဲလ်အသင်းကနေ ဂျူဗင်တပ်စ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးနောက် တစ်ပတ်လုပ်ခလစာ ပေါင် ၅၄၀၀၀၀ အထိရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ရော်နယ်ဒိုဟာ အခြားကြော်ညာတွေကနေ ၀င်ငွေတွေလည်း ရရှိနေပေမယ့် ဂျူဗင်တပ်စ်စတားရဲ့လုပ်ခလစာက အခြားစီးရီးအေအသင်း ၄ သင်းဝင်ငွေထက်ပိုများနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒယ်လိုစပေါ့တ်သတင်းဌာနရဲ့အဆိုအရ ယူနိုက်တက်တိုက်စစ်မှူးဟောင်းဟာ အီတလီရဲ့လုပ်ခလစာအကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ်ရပ်တည်နေပြီး ဒုတိယလုပ်ခလစာရရှိနေတဲ့သူထက် ၄ ဆ လောက်ပိုများနေတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အီတလီသတင်းဌာနရဲ့အဆိုအရ ဂျူဗင်တပ်စ်စတားရော်နယ်ဒိုရဲ့အသင်းဖော် ဒီလစ်ဂ်ျဟာ တစ်နှစ်လုပ်ခလစာ ပေါင် ၇.၂ သန်းရရိနေပြီး တစ်ပတ်လုပ်ခလစာ ပေါင် ၁၃၈၀၀၀ အထိရရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရော်နယ်ဒို ၊ ဒီလစ်ဂ်ျတို့နောက်မှာတော့ ဒိုင်ဘားလားက ပေါင် ၆.၆ သန်း ၊ ရာဘီအော့က ပေါင် ၆.၃ သန်း ၊ ရမ်ဆေးကလည်းပေါင် ၆.၃ သန်းရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒယ်လိုစပေါ့တ်သတင်းဌာနက ဂျူဗင်တပ်စ်ရဲ့လုပ်ခလစာဟာ စီးရီးအေကလပ် ၄ သင်းဖြစ်တဲ့ အူဒီးနီးစ် ၊ ဗီရိုနာ ၊ ခရိုတိုနီ ၊ စပီဇီယာတို့ထက် ၀င်ငွေပိုများနေတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကစားသမားတွေအပြင် အင်တာမီလန်စတား လူကာကူကလည်း စီးရီးအေရဲ့လုပ်ခလစာအများဆုံးကစားသမားအဖြစ်ပါဝင်နေပါတယ်။ အသက် ၂၇ နှစ်သားဟာ ယူနိုက်တက်ကနေ အင်တာကိုရောက်လာပြီးနောက် တစ်နှစ်လုပ်ခလစာ ပေါင် ၆.၈ သန်းအထိ ရရှိနေပါတယ်။ စီးရီးအေရဲ့လုပ်ခလစာအများဆုံးကစားသမား ၁၀ ဦး – ၁၀. အီဘရာဟီမိုဗစ် – ပေါင် ၆.၃ သန်း
၉. ဆန်းချက်ဇ် – ပေါင် ၆.၃ သန်း ၊ ၈. ရမ်ဆေး- ပေါင် ၆.၄ သန်း ၊ ၇. ရာဘီအော့ – ပေါင် ၆.၄ သန်း ၊ ၆. ဒိုင်ဘားလား – ပေါင် ၆.၆ သန်း ၊ ၅. ဒီဇီကို – ပေါင် ၆.၈ သန်း
၄. အဲရစ်ဆင် – ပေါင် ၆.၈ သန်း ၊ ၃. လူကာကူ – ပေါင် ၆.၈ သန်း ၊ ၂. ဒီလစ်ဂ်ျ – ပေါင် ၇.၂ သန်း ၊ ၁. ရော်နယ်ဒို – ပေါင် ၂၈ သန်း
ဒယ်လိုစပေါ့တ်က ဂျူဗင်တပ်စ်နည်းပြ ပီယာလိုဟာ တစ်နှစ်လုပ်ခလစာ ပေါင် ၁.၆ သန်းရရှိနေပြီး လာဇီယိုနည်းပြ အင်ဇာဂီ ၊ ဘိုလော့ဂ်နာနည်းပြ မီဟယ်လိုဗစ် နဲ့ အေစီမီလန်နည်းပြ ပီအိုလီတို့ကတော့ တစ်နှစ်လုပ်ခလစာပေါင် ၁.၈ သန်းအထိရရှိနေတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။